देश राज्य चलाउनेहरु भर्खर १० कक्षाको परीक्षा दिदै छन ! डिग्री पढेकाहरु कोरिया जान फारम भर्दै छन ! बिचित्रको छ हाम्रो देश नेपाल - Jerung Films
देश राज्य चलाउनेहरु भर्खर १० कक्षाको परीक्षा दिदै छन ! डिग्री पढेकाहरु कोरिया जान फारम भर्दै छन ! बिचित्रको छ हाम्रो देश नेपाल
कुनै नबुझी, प्रस्ट नभई कुनै कुराको पछि लाग्ने बानी विकास भएको छ। यो घातक छ।’ विमानस्थलको भन्सारमा सुरक्षा सतर्कताका लागि गरिएको परीक्षणलाई पनि अपमानको रुपमा व्याख्या गरिएकोमा भन्सार प्रमुख ठाकुरले दुःख व्यक्त गरे। ‘यहाँ कामदारको ज्याकेट खोल्न लगाइयो भनेर कुरा उठाइएको छ। ज्याकेट, बेल्ट, पर्सजस्ता कुरा विमानस्थलमा खोलिन्छ जुन हाम्रो सुरक्षा सतर्कताका लागि हो,’ उनले भने, ‘यसलाई भावनासँग जोडेर प्रचार गरिनु राम्रो होइन। सुरक्षामा सम्झौता गरिनुहुन्न।’ टाइम्स अफ नेपाली